Iwe unogona kuwana yako drone driver rezinesi zvakananga pane chero chikoro chekutyaira | Mahara emahara
Unogona kuwana rezinesi rako rekutyaira drone zvakananga pane chero chikoro chekutyaira
Chimwe chezvikumbiro zvikuru zvinoitwa nedrone mutyairi wendege ndechekuti pakupedzisira zvigadziriswe kuti ndeupi mutumbi unogona kusimbisa ruzivo rwako neruzivo rwemitemo yakasiyana iripo maererano nekushandisa kwedroni. Zviripachena iye atove nezvimwe zvakataurwa kuitira kuti zvive zvake kutyaira zvikoro avo vanogona kupa kudzidzisa vatyairi vemadhironi emangwana vachizadzisa izvo, mushure mekupedza kosi iyi, vashandisi vanogona kuwana yavo chitupa chepamutemo chinovadzidzisa semutyairi wedrone neHurumende Agency yeAviation Safety (AESA).
Panguva ino, zvakakosha kuratidza iro basa hombe riri kuitwa neSiseko yeNational Driving School Confederation kuitira kuti izvi zvigopedzisira zvaitika nekubatana neSalamanca Driving School Association. Sekuzivikanwa louis rodero, iyezvino purezidhendi weSalamanca Driving School Association, nzvimbo zhinji dzeSalamanca dziri kunyatsofunga nezvekutanga iyo zvepamutemo zvekudzidzisa makosi evanoshandisa drone, zvakafanana mune chero munhu anofarira anogona kuve nyanzvi yedrone mutyairi.
Salamanca Driving School Association inofungisisa kugona kupa makosi epamutemo kuti uve nyanzvi yedrone mutyairi
Kuenda mune zvakadzama zvishoma, ndikuudze kuti nhasi danho rinotenderera nekudzidziswa kwevatyairi vemadhiraivha nekwanisi yekudzora zvishandiso zvine huremu hwakanyanya nguva dzese dzinofanirwa kunge dziri shoma pane 25 kilos. Tiri kutaura nezve kosi inozogara pakati pemwedzi mumwe kusvika miviri, panguva iyo iyo nguva yekudzidzira ichizobatanidzwa.
Nehurombo, isu tiri kungotaura nezvechisungo chimwe chete, kunyangwe pachangu ini ndinofanira kubvuma kuti chimwe chinhu chakareruka sezvacho chakatofambira mberi sekuziva kuti kosi iyi inogona kuve nemutengo unoshamisa. ichave yakatenderedza 800 kusvika 900 euros. Izvo zvave zvichifungidzirwa kuti chero mutyairi wendege anofanirwa kutora kosi yakajairika pamwe nedzimwewo dzakasarudzika mashandisiro anozopihwa iyo drone munzvimbo dzakasiyana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mahara emahara » Drones » Unogona kuwana rezinesi rako rekutyaira drone zvakananga pane chero chikoro chekutyaira
Unoziva here kana drone inogona kuchinjika ne3D kudhindwa? Ini ndinoshandisa Shumba 2 uye ini ndoda kuita chirongwa chakanyanya chinzvimbo neichi
Stratasys, Dassault Systèmes uye Easton Lachappelle vanobatana nemauto muchirongwa chekugadzira zvirinani zvakaprindwa